Uyilo lwe-LG Q9 engatyhilwanga kuguqulelo oluncinci | I-Androidsis
UNerea Pereira | | LG, Izaziso
Sonke siyazi ukuba kulo nyaka iinkampani ezininzi zobuchwephesha beselfowuni zazise ngee-smartphones ezenza ukuba zenziwe ngokwenyani. Enye yezi zinto ziinotshi zesikrini, kwaye i-LG sele iyazisile kwiscreen se LG G7 Fit. Sithetha ngeefowuni eziphakathi, ngoko ke zinomdla kwaye zinobuchule kwesi sizukulwana sihambileyo. Kwaye sinetyala elitsha kunye naye I-LG Q9.
Kule meko, sithethe ngemodeli yexesha elizayo ekufutshane nenkampani esekwe kubuchwephesha yaseSeoul, i I-LG Q9. Kwaye kukuba kumfanekiso ocociweyo wale smartphone kuboniswe inotshi yescreen. Ukongeza, oku kuhluza nako kuza nezinye iimpawu zesi sixhobo, ke ngoku sinokwazi izinto ezithile kwaye siyazi ukuba siya kuzifumana xa siyithenga.
Iimpawu zekamva le-LG Q9: isikrini kunye neprosesa
Ukuba sithetha ngesikrini, le fowuni intsha iya kuba nayo 6,1 intshis, ukongeza kubandakanywa inotshi kwiscreen, nge-19: 9 ratio yepaneli. Ngokuphathelene nesisombululo, akukaziwa ukuba sinokulindela ntoni, kodwa ukuba sijonga usapho lwe-LG Q, kunokwenzeka ukuba yi-FullHD +, njengakwi-LG Q8.
Siyazi ukuba i-LG Q9 yexesha elizayo izakubonisa Inkqubo ye-Snapdragon 660, I-octa-core SoC ekwaziyo ukusebenza kwe-2GHz kunye ne-GPU ethembisa ukuphila ngoku kulindelweyo. Le GPU iya kuhamba kunye ne-4 GB ye-RAM kunye neendlela ezimbini zokugcina zangaphakathi, i-32GB kunye ne-64GB ngokwahlukeneyo.
Okwangoku sinokulinda kuphela side sazi yonke into iinkcukacha malunga ne-LG Q entsha9, zombini ibhetri kunye neekhamera, ezinokusothusa kwicandelo eliphakathi. Kwaye ngaphezulu kwako konke ukwazi ixabiso eliza kukhethwa ngumvelisi we-LG, kodwa siyakholelwa, ngenxa yokuvuza okujikeleze i-euro ezingama-350. Siyathemba ukuba iyakuba ngumnxeba ophila ngokulindelweyo kwaye ukhuphisane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG Q9, ezi zinikezelo zingqina uyilo lwayo